नेपालमा पहिलो पटक कार्डियाक एमआरआई सेवा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
नेपालमा पहिलो पटक कार्डियाक एमआरआई सेवा
२०७८, १७ आश्विन आईतवार १२:१७ मा प्रकाशित
डा. निर्मलप्रसाद न्यौपाने रेडियोलोजीमा नेपालबाट युरोपियन डिप्लोमा गर्ने पहिलो रेडियोलोजिष्ट हुनुहुन्छ । यो रेडियोलोजिष्टको स्ट्यान्डर्ड एक्जामिनेसन सर्टिफिकेट हो जसले युरोपियन स्टैण्डर्डको रिपोर्टिङको प्रतिनिधित्व गर्छ । डा. न्यौपानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट एमबीबीएस र एमडी गर्नुभएको हो । डा. न्यौपानेले भारतको बैङ्गलुरुस्थित नारायणा हृदयलयबाट कोर्डियोथोरासिक रेडियोलोजी विषयमा पोष्ट ग्राजुएट तालिम गर्नुभएको छ । कार्डियाक रेडियोलोजीमा थप तालिम प्राप्त गर्ने पनि डा. न्यौपाने पहिलो हुनुहुन्छ ।
मुलुकले न्युरो इमेजिङ, इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी, मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलोजी, फिमेल इमेजिङ, चेस्ट (छाति) इमेजिङ आदिमा फड्को मारिसकेको छ । तर कार्डियाक रेडियोलोजीमा हामी धेरै पछाडि छौं । अत्यन्तै कम रेडियोलोजिष्टले कोरोनरी एवं कार्डियाक सिटी स्क्यान गरिरहेका छन् । तर त्यो भन्दा फङ्सनल कार्डियाक एम आर आई कसैले पनि गरेको पाइँदैन । कार्डियाक एम आर आई गर्न विदेश जानुपर्ने बाद्यता थियो । यसैलाई दृष्टिगत गरी काठमाडौंको बालुवाटारस्थित टेस्ला डायग्नोष्टिक क्लिनिकले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित कार्डियाक एम आर आई सेवा सुरु गरेको छ । सम्भव त मुलुकमै पहिलोपटक स्पेशिफिक कार्डियाक एम आर आई सेवा सुरु भएको छ । अब बिरामीले कार्डियाक एम आर आई सेवा लिन विदेश धाउनुपर्दैन । यसै सेरोफेरोरोमा रहेर कार्डियाक रेडियोलोजिष्ट डा. न्यौपानेसँग जनस्वास्थ्य सरोकार राष्ट्रिय मासिक पत्रिकाले अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेको छ ।
के हो कार्डियाक एमआरआई ?
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा चिरफार नगरी मुटुको सम्पूर्ण फङ्सन, मुुटुको चाल, भाल्भको कार्यक्षमता र मुटु तथा फोक्सोमा आउने तथा जाने रगतको सम्पूर्ण विश्लेषण हो कार्डियाक एम आर आई ।मस्तिष्क, जोर्नी र प्रोस्टेट आदिको एम आर आईमा स्थिर अवस्थामा इमेजिङ लिएर बिरामीको समस्या सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । तर कार्डियाकमा त्यस्तो हुँदैन । मुटुको निरन्तर हार्ट विट (मुटुको धड्कन) भइरहने र यसरी धड्कन भइरहेको मुटुको एम आर आई गरेर तस्विर निकाल्न अरु स्थिर अवस्थाको जस्तो सहज हुँदैन । खासगरी कार्डियाक एम आर आईमा मुटुको च्याम्बरले पम्प गरे/नगरेको, रगत कुन ठाउँबाट कतातिर पम्पिङ भइरहेको छ आदि बारे छर्लङ जानकारी प्राप्त हुन्छ । कार्डियाक एम आर आईको विभिन्न कोणबाट मुटुको अवलोकन गर्नुपर्छ ।
यसले मुटुमा आउने रगत र जाने रगतको परिमाण, सिस्टममा जाने रगत र फोक्सोमा जाने रगत बराबर भए/नभएको, मुटुले राम्रोसँग काम गरे/नगरेको, मुटुको कुन च्याम्बरले कति काम गरेको छ, भाल्भ साँधुरो भए/नभएको लगायत मुटुको सम्पूर्ण कार्यक्षमता र समस्याबारे विश्लेषण सहितको जानकारी प्रदान गर्छ ।
कार्डियाक एमआरआईबाट के कस्ता जटिल समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ ?
वयस्क व्यक्तिहरुमा मुटुको भित्ता सुन्निएर रक्तसञ्चारमा जटिल अवस्था आउन सक्छ जसलाई हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोप्याथी भनिन्छ । कार्डियोमायोप्याथी एक वंशाणुगत रोग हो । कतिपयमा कार्डियोमायोप्याथीको लक्षण नदेखिन सक्छ । यो रोग निकै घातक हुन्छ । जस्तै ः मैदानमा खेलिरहेको खेलाडी एक्कासी लड्यो भने उसलाई अस्पताल पु¥याउन पनि भ्याईंदैन । शव परीक्षण (एटोप्सी) गरेर हेर्दा कार्डियोमायोप्याथी पुष्टि हुन्छ । यस प्रकारको समस्या भएका कतिपय व्यक्तिहरु एक्कासी लड्ने, बेहोस आदि हुने गर्छन् । यसरी मुटुको भित्ता सुन्निनुको मुख्य कारण, मुटुको भित्तामा घाउ भए/नभएको, मुटु सुन्निएर कुन भागमा असर पु¥याइरहेको छ वा मुटुमा रगत आउन जान कतिको अवरोध पुगेको छ भनेर थाहा पाउन कार्डियाक एम आर आई गर्नुपर्छ । नेपालमा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोप्याथी भएका बिरामी धेरै छन् । विगतमा यस प्रकारको समस्या पहिचान गर्न भारत लगायतका देशमा जानुपर्दथ्यो ।
डा. निर्मलप्रसाद न्यौपाने
कतिपय मानिसमा कोभिडलगायत भाइरल संक्रमणका कारण मुटु सुन्निने समस्या हुनसक्छ जसलाई मायोकार्डाइटिस भनिन्छ । इको कोर्डियोग्राफीबाट मुटु सुन्निएको पहिचान हुन सक्दैन । तर कार्डियाक एम आर आईबाट सुन्निएका मुटुको भागहरु स्पष्ट रुपमा पहिचान हुन्छ ।
३. मुटुको नसा बन्द भएको भागमा स्टेन्ट हालेर काम गर्छ कि गर्दैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
४.मुटुका भाल्भहरु राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
५. जन्मजात हुने मुटुरोगहरुमा रगतको प्रकार निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
६. मुटुमा रगत जमेर बसेको क्लट र मुटुमा हुने ट्युमरहरुको सम्पूर्ण रुपमा मूल्यांङकन गर्न सकिन्छ ।
७. मुटुलाई चारैतिरबाट घेरेर राख्ने पेरिकार्डियमसँग सम्बन्धित रोगहरुको पहिचान गर्न सकिन्छ ।
कार्डियाक एमआरआई कसरी गरिन्छ ?
कार्डियाक एमआरआई गर्न छुट्टै कार्डियाक कोइल प्रयोग गरिन्छ । विशेष किसिमको ईसीजी मेसिन जोडेर मोनिटरिङ गरिन्छ । यसमा विशेष ग्रेफाइड लिड प्रयोग गरिन्छ । एम आर आई गर्नुपूर्व छुट्टै प्रोग्राम तयार पारिन्छ । फोटो निकालेपछि त्यसलाई विश्लेषण गर्ने छुट्टै सफ्टवेर हुन्छ । सबै मिलाएर एउटा कार्डियाक एम आर आई गर्दा मात्रै झन्डै एकदेखि डेढ घण्टा लाग्छ । त्यसपछि त्यो सबै डाटाको एनालाईसिस गर्न अर्को दुईदेखि तीन घण्टा लाग्छ ।
कार्डियाक एमआरआईका के के फाइदा छन् ?
कार्डियाक एम आर आईको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन । मुटुको कुनै भागको नशा बन्द भएको ठाउँमा रगत आपूर्तिको अवस्था, रगत आपूर्ति कम भएको ठाउँका कोषिका जीवित भएनभएकोदेखि नशा खोल्न स्टेन्ट राख्ने कि नराख्ने भन्नेसमेत जानकारी प्राप्त हुन्छ । रगतको आपूर्ति नभएर कोषिका मरिसकेको अवस्थामा स्टेन्ट राख्दा कुनै फाइदा हुँदैन ।
यसैगरी, मुटुसम्बन्धि समस्या भएका बालबालिकाको शल्यक्रिया गरेपश्चात् मुटुमा आएको परिवर्तन र मुटुको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकिन्छ । यसैगरी मुटुको ट्युमर पत्ता लगाउन सिटी स्क्यानभन्दा कार्डियाक एम आर आई धेरै गुणा प्रभावकारी मानिन्छ । यसबाट ट्युमरको अवस्था, ट्युमर फैलिएको भाग, मुटुको च्याम्बरको अवस्था, मुटुभन्दा बाहिर फोक्सोसम्म फैलिए/नफैलिएको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, भल्भको अवस्था बुझ्न पनि कार्डियाक एम आर आई प्रभावकारी मानिन्छ । भल्भ साँघुरो भए/नभएको, रगत जान अप्ठेरो छ वा छैन, रगत फर्केर आइरहेको पो छ कि ? जस्ता कुरा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । विशेषगरी मुटु वरिपरि पेरिकार्डियम लेयर हुन्छ । कसैकसैमा उक्त लेयर मोटो भइदिन्छ र मुटु रिल्याक्स हुन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा छाती र पेटमा पानी जम्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ । कार्डियाक एमआरआईको मद्दतले पेरिकार्डियम लेयरको अवस्थासमेत पहिचान गरिदिन्छ ।
कार्डियाक एमआरआई गर्न कहिले रिफर गर्ने ?
इकोकार्डियोग्राफी गरिसकेपछि पनि रोगबारे स्पष्ट पहिचान नभएको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा कार्डियाक एम आर आई गर्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा रोग पहिचान नभई थप जटिलता आउसक्छ । कतिपय अवस्थामा मुटुरोग विशेषज्ञले बिरामीको रोगको अवस्था हेरेर सिधै कार्डियाक एम आर आई गराउन पनि सक्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मुटु रोग विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार मात्र कार्डियाक एम आर आई गराउनुपर्छ ।
बिरामीले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
कार्डियाक एम आर आई गर्ने अघिल्लो दिन मुटुको चालमा फरक पार्नसक्ने चिज जस्तै कफी, कोला, ड्रिंक, क्याडवरी चक्लेट खान हुँदैन । कसैकसैलाई एम आर आईमा प्रयोग हुने नर्मल कन्ट्रासले पनि एलर्जी हुनसक्छ । त्यसैले एम आर आई गर्नुपूर्व कन्ट्रासको एलर्जीबारे जाँच गर्नुपर्छ । त्यस्तै गर्भवती महिलाको एम आर आई गर्दा आवश्यकताअनुसार योजना बनाउनुपर्छ । एम आर आई गर्दा प्रयोग गरिने औषधि मिर्गौलाले फिल्टर गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धि जाँच पनि गर्नुपर्छ ।
कार्डियाक एम आर आई गर्दा कुनै समस्या हुन्छ ?
सामान्यतया एम आर आईको दौरानमा कुनै पनि समस्या आउँदैन । तर कतिपय अवस्थामा बिरामीलाई कुनै समस्या आएको अवस्थामा संकेत गर्न एउटा बजर उपलब्ध गराइन्छ । सो बजर बजाएमा बिरामीलाई असहज भएको बुझ्नुपर्छ ।
नतिजा प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ ?
कार्डियाक एम आर आईको नतिजा २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइन्छ । बिरामीको सम्पूर्ण कागजात नपुगेको र सम्बन्धित चिकित्सकसँग अन्य जानकारी लिनुपर्ने अवस्थामा भने केही बढी समय लाग्नसक्छ ।
बिरामीको रोगको प्रकार र गर्नुपर्ने जाँच अनुसार यसमा लाग्ने खर्च फरक हुन्छ । औषधि दिनुपर्ने÷नपर्ने अवस्था हेरेर पनि खर्च फरक पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा कार्डियाक एम आर आई गरेको खर्च २० देखि २५ हजारसम्म लाग्नसक्छ ।
गुणस्तरीयतामा कतिको ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ ?
हामीले गरेको सम्पूर्ण जाँच र विश्लेषणको रिपोर्ट हामी सिडीमा हालेर बिरामी वा उसका आफन्तलाई उपलब्ध गराउँछौं । त्यो जाँच र रिपोर्ट संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि देखाउन सकिन्छ । हामीले गरेको रिपोर्ट हेरेर ओहो नेपालमा पनि यस्तो डेडिकेटेड कार्डियाक एम आर आइ पनि हुन्छन् भनेर अचम्म मानेर हामीलाई धेरै डाक्टरहरुले तत्काल इमेल गर्नुहुन्छ । हामीले गरेको रिपोर्ट र उहाँहरुको सेकेन्ड अ‍ेपिनियनमा खासै भिन्नता पाइएको छैन ।